Guggulsterone powder (95975-55-6) hplc = 98% | Yakarura R & D Reagents
Guggulsterone powder is phytosteroid inowanikwa mumucheka weguggul plant, Commiphora mukul. Guggulsterone poda inogona kuve seimwe ye stereoisomeri mbiri, E-Guggulsterone powder uye Z-Guggulsterone powder. Mune vanhu, inoshanda semurwi we farnesoid X receptor, iyo yaimbove yatenda kuti inokonzera kupera kwecholesterol mukati muchiropa. Tsvakurudzo dzinoverengeka dzakabudiswa izvo zvinoratidza kwete zvachose kuderedzwa kwecholesterol yose inoshandiswa uchishandisa madhigirio akasiyana-siyana eGuggulsterone powder, uye mazamu ezvishoma zvakanyanya lipoprotein ("yakaipa cholesterol") yakawedzera muvanhu vakawanda. Kunyange zvakadaro, Guggulsterone powder inoshandiswa mune zvakawanda zvinovaka muviri.
Oleogum resin (inozivikanwa seguggul) kubva kugugugul tree, Commiphora mukul, yakawanikwa muIndia, Bangladesh, uye Pakistan, yakashandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana kusanganisira hyper-cholesterolemia, atherosclerosis, rheumatism, uye kuneta kwemazana emakore emakore. Guggulsterone powder iri kure neguggul yakave yakarongerwa sekuti bioactive ndiyo inobatsira chirwere cheguggul. Sezvo chidzidzo chekutanga chichiratidzira mishonga yekurapa yeguggul mune imwe mhando yemhuka mu1966, dzakawanda dzakagadziriswa uye zvipatara zvinokonzerwa. Kunyange zvazvo kusawirirana mune zvidzidzo zvakagadziriswa, nzira yepamusoro yehutano, huwandu hwekuongorora, huwandu hwemuenzaniso, uye huwandu hwehuwandu hwehuwandu hwehuwandu humwe humwe husinganzwisisiki mukugadzirisa kurapwa, nhamba yakakonzerwa kubva mu in vitro, preclinical, uye kliniki zvidzidzo zvinotsigira zvakanyanya kuda kurapa kweguggul inorondedzerwa mu mifananidzo yekare yeAyurvedic. Zvisinei, zvidzidzo zvekuchikoro mune ramangwana nehukuru hukuru uye nguva yakareba dzinodiwa kusimbisa zvirevo izvi. Mishonga yemwoyo yehutano inobva pamabasa akawanda emishonga yemasikemikari anosangana ne guggul kana Guggulsterone powder, kunyanya ye hypolipidemic, antioxidant, uye antiinflammatory activities. Yakagadzirwa kuti Guggulsterone poda inopesana ne farnesoid x receptor (FXR), chinhu chinokosha chekunyorwa kwechirevo chetero chekuchengetedza cholesterol uye bile acid homeostasis. Izvo zvinopesana neFXR neGuggulsterone powder zvakagadziridzwa sechinhu chinokonzerwa nehupirlipidemic yake. Kuongorora kwechangobva kuitika kunoratidza kuti Guggulsterone powder inogadzirisa bile bile inotengeserana kunze kwepombi (BSEP), mutakuri we-efflux ane basa rekubvisa cholesterol metabolites, bile acid kubva pachiropa. Kurongeka kwakadaro kweBSEP kuratidzwa neGuggulsterone powder kunoshusha cholesterol metabolism mu bile acids, uye naizvozvo inomirira imwe nzira inogona kugadzirisa basa rayo yepayipipidhiya. Guggulsterone powder yakawanikwa ichiita kuti inopesvedzera kushandiswa kwenyukliya-kappaB (NF-kappaB), mutongi anonyanya kukosha wemhinduro dzinopisa. Kudzvinyirira kwakadaro kweNF-kappaB kushandiswa neGuggulsterone powder kwakagadziriswa senzira yekusagadziriswa kweGuggulsterone powder.
Nzira dzekupedzisira iyo Guggulsterone powders inogona kubatsira mukurwisa kupisa mafuta iri muzvokudya zve ketogenic nekukura kwehomoni kushandiswa. Nokufamba kwenguva, zviyo zve ketogenic zvinowanzoderedza hutachiona hwehutachiona kuburikidza nekuderedza kutendeuka kwe T4 kune zvakanyanya T3. Uyewo, apo Guggulsterone powders yakatorwa zuva rega rega kwemwedzi ye3, yakagadzirisa kuderera kwezvipembenene mune vazhinji vevarwere. Ne tetracycline, chikamu chekupera muzvipembenene zvinoputika chaiva 65.2% kana ichienzaniswa ne68% neGuggulsterone powders. Sezvaunogona kuona, shamwari yedu Guggul inonyanya kukurira kurwisana nemakwenzi.
Ndiani angabatsirwa neizvi? Hmmm !!! Zvakanaka, sezvandinogona kutaura, anenge munhu wose. Hapana munhu mumwe chete wandinoziva kuti haadi kuda kwemavara akanaka. Izvi ndezvechokwadi kunyanya kune avo vane anabolic / androgenic steroid sezvo izvi zvinowedzera kuwedzera mafuta eganda uye zvingaita zvehuni. Rega ndifungisise - hakuna munhu ari kuseka naHugugulee Guggulee! Zvechokwadi, angave ane zita rinonakidza asi mubhuku rangu iye i hero. Ndezvipi zvimwe zvaungagona kuwana muzana unobatsira iwe kurasikirwa nemafuta, kuvandudza mararamiro ako echolesterol, uye panguva imwechete unovandudza ruvara rwako? Ndakatarisa kwenguva refu uye zvakaoma uye ndisina kuwana kunyange mumwe mupikisani.
Kwezviuru zvemakore, guggul resin yakashandiswa mumishonga yemagariro kurapa rheumatism, arthritis, zvirwere zvehupombwe, zvironda zvehutachiona, zvirwere zvekuvhenekera uye zvirwere zveganda. Mishonga yemazuva ano yakawana uchapupu hwokuti Guggulsterone powders inogona kuita muchiropa, kugadzirisa kukanganiswa kwepidid metabolism yakadai sepamusoro cholesterol. Nenzira isingazivikanwi, Guggulsterone powders inowedzerawo utachiona hwekugadzira mahomoni, kuwedzerwa simba rekushandisa mumuviri.
Guggulsterones (guggul) yekurasikirwa uye kuumbwa kwemuviri